Isikhwama Somugqa Webhodi Yesithwathwa Sebhodi China Manufacturer
Incazelo:Isikhwama Seqhwa Sokuhamba,Ukuhamba Kwesikhwama Seqhwa,Isikhwama seGiya seGiya
 HomeImikhiqizoIzesekeli zeSkiIsikhwama seSkiIsikhwama Somugqa Webhodi Yesithwathwa Sebhodi
I-Model No.: HXW-S22
Ukukhiqiza: 100000 Pieces per Month
Sisebenzisa indwangu esindayo ye-polyester ngaphandle kwezikhwama zethu ze-ski ukuhlinzeka ngokuqinile kokumelana nokugqabhuka kokuqina kanye nokuqinisekisa impilo yomkhiqizo. Ingaphakathi lesikhwama se-ski lenziwe ngefilimu ye-polyethylene, enokuma okuhle kwamanzi.
Ungasonga isikhwama se-ski sibe yizicucu ezi-3 futhi usebenzise imichilo eseceleni ukuze ikwenze kube lula ukugcina isikhala. Sisekela izinsizakalo ezenziwe ngezifiso ngosayizi, umbala nokuphrinta kwe-logo
I-Skiing iyimidlalo ebusika ethandwa kakhulu futhi ethandekayo emhlabeni. Ngaphambi kokuqala uhambo lwakho lokushushuluza, kudingeka ugcine gear yakho yokushushuluza kahle. Isikhwama se-hxw ski sinokuhlangabezana nezidingo zakho futhi sigcine yonke imishini ebaluleke kakhulu ye-ski ebangeni lengalo.
I Izici Hongxiangwen Snowboard Bag
Ubukhulu: 195 * 25 * 10CM
Ukulungiswa kobude obulula
Ukulayisha okulula nokulayisha
Ibhendi yokuvumelanisa eguquguqukayo
Indwangu eqinile ye-nylon
Isisindo: 840 amagremu
Isikhwama se-Snowboard Ski Boot Xhumana Nanje
Isikhwama Sasemanzini Sangaphandle Sesiqhingi Sangaphandle Xhumana Nanje
I-600D Waterproof Nylon Sport Custom Bag Xhumana Nanje
Isikhwama Esiphezulu Sokuqina Kwemanzi Esishubile Xhumana Nanje
Izikhwama ze-Snowboard Ski Sports Xhumana Nanje
Isikhwama Seqhwa Sokuhamba Ukuhamba Kwesikhwama Seqhwa Isikhwama seGiya seGiya Isikhwama seSki Yezokuhamba Isikhwama Sokuhamba KweSki Isikhwama Sesikhwama Sama-Ski Isikhwama Sokuhamba Ngeqhwa Isikhwama Sokuhamba Kwebhasi